Hlola iCyprus, isiqhingi esivelele emhlabeni wonke - World Tourism Portal
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili eziphezulu eCyprus.
Okufanele ukwenze eCyprus
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yaseCyprus
Bukela ividiyo ekhuluma ngeKhupro
Hlola iCyprus isiqhingi oLwandle iMedithera, eningizimu yeTurkey. Ngemuva kweSisily neSardinia, iCyprus iyisiqhingi sesithathu ngobukhulu eLwandle iMedithera. Yize lesiqhingi sisendaweni yase-Asia ngokwezepolitiki izwe lase-Europe futhi siyilungu le-European Union.
Ngenxa yesikhundla sayo esihle yathonywa amasiko amaningi aphesheya. Kukhona okusele okufakazela ukuthi lalinabantu ekuqaleni kwenkulungwane ye-10th BC edolobhaneni laseNeolithic laseKhirokitia.
ENyakatho neCyprus imithombo yaManzi yatholakala futhi kukholakala ukuthi ingemidala kunayo yonke emhlabeni, eyabhalwa nge9,000 kuya eminyakeni engu-10,500.
ECyprus inenqwaba yezikhumbuzo eziyisikhumbuzo zaseByzantine. Kuhlakazeke esiqhingini sonke kukhona amasonto omlando nezindela. Ukubaluleka kwesiko lalesi siqhingi kuhlonishwe yi-UNESCO ehlanganise amasonto ayishumi alesi siqhingi ohlwini lwayo. Onke amasonto ayishumi aqala nge-11th kuya kwikhulu le-17th akhiwe esifundeni sezintaba I-Troodos.
Iziza eziningi zemivubukulo nezasendulo ezahlakazeka esiqhingini, zivela ngeNkathi Entsha Yesikhathi Sokufika eMbusweni WaseRoma
indawo enhle engasogwini yesiqhingi - namanje engasasebenzi ezindaweni eziningi - kufanelekile ukuhlola
INicosia, inhloko-dolobha njengoba inengcebo yomlando, yagcina izindonga zaseVenetian ezungeze idolobha, imigoqo nezinye izindawo zokudlela ezinhle ngaphakathi kwezindonga ezindala zedolobha futhi empeleni 'ulayini oluhlaza' - umugqa ohlukanisa ingxenye yaseTurkey yaseCyprus, edlula maphakathi nesikhungo saseNicosia, manje okuwukuphela kwenhloko-dolobha ehlukanisiwe
Izintaba zaseTroodos, ezikhuphuka njengamamitha we-1952, zinikezela ngezindlela ezinhle zokuhamba ngomgwaqo futhi zivusa namadolobhana amancane afana neKakopetria, iPlatres nePhini. Ebusika kunethuba lokushushuluza lapho bese kwenziwa indawo yokushushuluza
Indawo yasePitsilia ezintabeni zaseTroodos, lapho impilo yezolimo kanye namanye ama-wineries amahle kakhulu angatholwa khona ngenkathi uhlala ezindaweni ezinkulukazi ezise-Agros, Kyperounda, Pelendri, Potamitissa nokuningi. Lapho ungavakashela ama-wineries ambalwa amahle kakhulu eCyprus, njengeKyperounda Winery, iTsiakkas Winery ePelendri.
Indawo ye-Commandaria yisifunda lapho kukhiqizwa khona i-dessert e-dessert ye-dessert edume. Ukuvakashela i-Commandaria Museum kusifanele isikhathi. Ungakhohlwa ukuma e-agrohotel yendawo, noma vakashela i-kafeneion yendawo ukuxoxa nabantu bendawo.
I-Hamam Omerye, iNicosia iyisakhiwo sekhulu le-14th esivuselelwe ukusebenza futhi njengehamisamu ukuze bonke bathokoze, baphumule futhi bavuselele. Ususela emuva ekubuseni kwaseFrance futhi okuphakathi enhliziyweni yedolobha elidala laseNicosia, umlando walesi sigcini sangekhulu le-14th, lapho wawumi khona njengeSonto lika-Augustinian weSt Mary. Kwakhiwe ngamatshe, okunamakhaza amancane, kubekwe ngokulandelana kwezikhathi ngasikhathi sokubusa kukaFrankish kanye neVenetian, cishe ngasikhathi sinye lapho idolobha lithola Izindonga zalo zaseVenetian. E-1571, uMustapha Pasha uguqule isonto laba yindawo yamaSulumane, ekholelwa ukuthi le ndawo yilapho umprofethi u-Omer aphumula khona lapho evakashele eNicosia. Iningi lesakhiwo sokuqala lacekelwa phansi yi-Otteryan artillery, yize umnyango ongaphandle omkhulu ungowesakhiwo saseLusignan se14th, kanti kusabonakala ingxenye yesikhumbuzo seRenaissance ngasenyakatho nasempumalanga yesikhumbuzo. I-hamam isasetshenziswa nanamuhla futhi ngemuva kwephrojekthi yayo yokuvuselela yakamuva, isibe yindawo eyintandokazi yokuphumula eNicosia. Ku-2006 ithole umklomelo we-Europa Nostra wokuLondolozwa kwamaGugu obuNjiniyela.
IKHORONI - ICALA LENKOLO YASEKHAYALimassol Isifunda)
I-PETRA TOU ROMIOU - INDAWO YOKUZALWA KWE-APHRODITE (Paphos Isifunda)
IKOLOSSI MEDIEVAL CASTLE (ISifunda se-Limassol)
I-Katio PAPHOS ArCHAEOLOGICAL PARK & TOMBS OF KINGS (Paphos District)
ISIHLOKO SE-CHOIROKOITIA NEOLITHIC SETTLEMENT (Larnaca Isifunda)
I-KATO PAPHOS CASTLE & HARBOR (ISifunda SasePaphos) I-Paphos Harbour ne-Medieval castle
I-APOLLO TEMPLE (ISifunda se-Limassol)
FAMAGUSTA GATE (Nicosia Isifunda)
I-UNESCO World HERITAGE - I-BYZANTINE PAITED CHURCHES (Izintaba zaseTroodos)
I-TZIELEFOS MEDIEVAL BRIDGE (Isifunda sePaphos / Izintaba zaseTroodos)
I-STAVROVounI MONASTERY (IsiFunda iLarnaca)
I-AGIA NAPA MONASTERY (Famagusta Isifunda)
I-NICOSIA VENETIAN WALLS (ISifunda saseNicosia)
IDolobha laseNICOSIA OLD (ISifunda saseNicosia)
I-Limassol OLD TOWN (ISifunda se-Limassol)
I-Limassol MEDIEVAL CASTLE (ISifunda se-Limassol)
I-LARNACA MEDIEVAL CASTLE (IsiFunda iLarnaca)
I-LARNACA SALT LAKE & HALA SULTAN TEKKE MOSQue (Isifunda saseLarnaca)
IDOLOBHA LENKATHI YANGEMPELA (esifundeni iLimassol)
Izindawo ezithakazelayo nazo
Larnaka lake echibini
Izindawo zokuhlala zasemakhaya zaseFikardou
ISonto lePanagia Aggeloktisti
ISonto lePanayia Chrysokourdaliotissa,
U-Agioi Varnavas no-Ilarion ePeristerona
ITroodos, iNtaba yeOlympus, ingadi ye-troodos botanic
Imfihlo yegodi sigodi
Iklabhu yegalufu Minthis
IsiNgisi sikhulunywa kabanzi ngabantu bendawo yonke iminyaka kuya kumazinga ahlukahlukeneyo okuguquguqukayo - ngokwengxenye ngenxa yokubusa kwangaphambilini kweBritish futhi ngokwengxenye ngenxa yezimboni zezokuvakasha. IsiNgisi asikhulunywa kabanzi enyakatho. Kodwa-ke, umuntu uzohlangana nezikhulumi ezingama-Greek nezikhulumi zaseTurkey ezisezindaweni zasemakhaya kuzo zombili izingxenye zesiqhingi, ikakhulukazi enyakatho futhi iningi lazo seligugile.
Ezinye izilimi ezijwayelekile ezikhulunywa kulesi siqhingi isiRussia, isiFulentshi nesiJalimane.
I-Kupro ine-euro (€) njengemali yayo yodwa kanye ne-24 amanye amazwe asebenzisa le mali ejwayelekile yaseYurophu.
Iwayini laseCypriot - Izinhlobonhlobo zasendaweni ezithandekayo ezaziwa njenge-Commandaria ziqinile, zinoshukela futhi zilingana newayini le-Porto
Umsebenzi wentambo oyindida - ukusuka edolobhaneni lase Lefkara.
I-Zivania - isiphuzo esinamandla sotshwala esinamandla
Izimpahla zesikhumba ezifana nezicathulo nezikhwama zezandla
Imidwebo esuka kugalari
Isikhathi esihle kakhulu sokuthenga sisuka ku-10am siye e-4pm ngaphandle kwalokho izitolo zingatholakala kalula zivaliwe. Ngokuvamile amanani ashibhile angatholakala emadolobheni amakhulu. Ama-Kiosks ngokuvamile awathengisi isinkwa nemifino.
I-cypriot meze (i-appetizer efana ne-Spanish tapas) iyindlela yobuciko, futhi ezinye izindawo zokudlela azisebenzi. Ama-Meze atholakala ezinhlobonhlobo zenyama noma ezinhlanzini kodwa kaningi eza njenge-batch exubekile, okuyinto ethokozisayo kodwa.
IHalloumi (Hellim) ushizi weCypriot oyingqayizivele, owenziwe ngengxube yobisi lwenkomo nolwemvu. Kunzima futhi okunosawoti lapho kungavuthiwe, kuyancipha futhi kuthambe lapho kuphekwe ngakho-ke kuhlanganiswa kube yosiwe.
ITaramosalata ngokwesiko yenziwe ngaphandle kwama-taramas, ukhula olunosawoti lwe-cod noma i-carp. I-roe ihlanganiswa nemvuthuluka yesinkwa noma amazambane abunjiwe. I-Parsley, u-anyanisi, isiphuzo sikalamula, i-oyili yamafutha omnqumo kanye noviniga kuyangezelelwa futhi kuyoliswe ngosawoti kanye nopelepele.
I-Dolma, upelepele wokufaka insimbi waseTurkey.
Kunamabhishi amaningi ongakhetha kuzo, nakanjani uzothola eyodwa evumelana nawe. Ukusuka emithonjeni ethule yasentshonalanga, ukuya ezindaweni zokuphumula ezinempilo empumalanga, lesi siqhingi sinokuthile kuwo wonke umuntu. Ugu olusempumalanga ludumile ngenxa yamabhishi alo acwebile anesihlabathi esimhlophe esinamanzi angaxutshani namanzi. Amabhawoti wamanzi ajulile anamadwala angaphandle alungele ukudonsa noma ukudonsa. Isihlabathi esimpunga esigcotshwe kahle esisogwini oluseningizimu siboleka ekuhambeni okude ebusika noma ekugijimeni, ngenkathi amatshe aseceleni asogwini olusentshonalanga beckon lapho ufuna ukuba wedwa.
Uma ufuna ukuhlola iCyprus, vele usebenzise esinye sezikhumulo sezindiza i3 eKhupro.
Isikhumulo sezindiza emhlabeni wonke saseLarnaca
Isikhumulo sezindiza emhlabeni jikelele sePaphos
Isikhumulo sezindiza samazwe omhlaba